dayniile » Su’aalaha ugu badan ee shacabku iska weydiinayaan inay wax ka qabato Dowladda Madaxweyne Farmaajo.?
Su’aalaha ugu badan ee shacabku iska weydiinayaan inay wax ka qabato Dowladda Madaxweyne Farmaajo.?
Dayniile Online, Isniin, 20 Maarso: Siyaabo kala duwan ayaa lagaga hadlaa dhacdooyinka siyaasadeed & kuwa amni ee Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho ka dhaca; Su’aalaha ugu badan ee ay bulshadu xilligan hadal-hayaan waxaa ka mid ah:-
Tan & markii Madaxweyne Farmaajo la doortay 8 Febraayo, Muqdisho waxaa ka dhacay dilal- joogta noqday oo loo geystay shaqaale & askar Dowladda ka tirsan & weliba dad shacab ah oo ku dhintay qaraxyo lagu bartilmaameedsanayey shaqsiyaad gaar ah, su’aasha arrintaasi la iska weydiinayo waxeey tahay; Muwaadiniintaas dhintay iyada oo Dowladda cusub mas’uuliyadda hayso, Dowladdu xil ma iska saartay xaqiijinta ammaanka & ka hortagga falalka qaarajinta.?
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ku labbisan derajada ugu sarreysa ee ciidamada milateriga Kenya, ayaa gudaha u soo galay Soomaaliya, isaga oo aan wax ruqsad ah weydiisan Dowladda Soomaaliya, wuxuu salaan ka qaatay ciidamadiisa Soomaaliya gudaheeda ku sugan; Dad badan waxeey u arkaan tillaabadaasi in ay tahay xadgudub Kenya ay ku soo xadgudubtay Soomaaliya, tillaabadaasi Dowladdu wax ma ka tiri.?
Shacab Soomaaliyeed oo u badan caruur iyo haween ayaa lagu duqeeyey Yeman iyaga oo doon saaran. Dowladdii duqeysay oo ah Sacuudiga ma aysan ka garaabin falkaas wuxuushnimada ah, ciidamada diyaaradaha haysta ee wax duqeyn karana waa kuwooda keliya; Adduunka kama dhicin Dowlad shacabkeedii la xasuuqay oo aan waxba ka dhihin. Teeda kale, Sacuudigu wuxuu qeyb ka yahay isbaheysiga raba inuu saldhig ka sameysto Berbera & Boosaaso. Maxeey Dowladda Soomaaliyeed dadkeeda ugu damqan la’dahay oo ay kaga aamusan tahay falkaas.?
Waxaa la isla dhexmarayaa warar sheegaya in ku dhawaaqista Golaha cusub ee Wasiirada uu hakid ku yimid markii ay soo farageliyeen shaqsiyaad ay ka mid yihiin Guddoomiyaha Baarlamaanka Jawaari & Madaxweynaha K/Galbeed Shariif Xassan; oo midna uu doonayo in Wasiirka Maaliyadda loo magacaabo Maxamed Aadan Farkeeti, halka kan kalena uu wato walaalkii Maxamed Xaaji C/nuur (Madeer), haddaba dadkii ku hanweynaa in Dowladda cusub ay dhinac iska dhigi doono in ay xilal u magacowdo kuwa ku caan ah musuq-maasuqa, nin jecleysiga & ku daneysiga kursiga waxaad moodaa in fikirkaasi uu meesha ka baxay.
Dowladdihii ka horreeyey tan uu madaxda ka yahay Madaxweyne Farmaajo, waxaa jiray in madaxweynayaasha maamul goboleedyadu u dhaqmayeen ilaa haddana u dhaqmayaan sida in ay yihiin Dowlado ka madax-bannaan Dowladda dhexe, iyaga oo safaro aysan waxba kala socon Dowladda dhexe ku taga meesheey rabaan, haddana markeey doonaanna Dowladda ugu caga jugleyn jiray in ay xiriirka u jarayaan, iyada oo 2-dii cisho ee u dambeeyey Madaxweynaha Puntland uu ku sugnaa Itoobiya halkaas oo uu kulamo kula lahaa Wasiirka arrimaha dibedda Itoobiya; intii aanu Itoobiya soo gaarinna wuxuu Imaaraadka heshiis kula soo saxiixday shirkad ajnabi ah oo ay ka wadahadleen suurtagalnimada in Dekadda Boosaaso oo ah Dekad Qaranku dhisay saldhig ay ka sameystaan Imaaraadka, Dowladda cusub ma ku baraarugsan tahay qatarahaas.?